राजेन्द्र महतो भन्नुहुन्छ : राष्ट्रघा’तीहरुलाई पहिचान गरि टुँडिखेलमा झु’न्ड्याउनु पर्छ…हेर्नुहोस् !
काठमाडौँ : जनता समाजवादी पार्टीका नेता राजेन्द्र महतोले संविधान सं’शोधन देशको अख’ण्डता, रा’ष्ट्रियता र सा’र्वभौमिकतासँग जोडिएको बताए । कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा नेपाली भू-भागमा स’मेटिनु सम्पू’र्ण नेपालीको लागि खुसीको कुरा भएको पनि महतोले बताए ।
प्रतिनि’धिसभाको शनिबारको बैठकमा नेपालको सं’विधान (दो’स्रो संशोधन) विधेयक, २०७७ माथिको दफा’वार छलफलमा बोल्दै नेता महतोले रा’ष्ट्रियता कसैको एकलौटी नहुने बताए । रा’ष्ट्रियता जाति, ध’र्म वि’शेष र क्षेत्रले नि|र्धारण नहुने उ’ल्लेख गर्दै नेता महतोले आजैबाट रा’ष्ट्रघा’त र रा’ष्ट्रवादको परिभाषा प’रिवर्तन गर्नुपर्ने बताए ।
वर्त’मान संवि’धानप्रति आफूहरुको ‘रि’जर्भेसन’ रहेको उल्लेख गर्दै पटक–पटक संवि’धानप्रति रहेको विभिन्न अस’हमतिहरुलाई स’म्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाइए पनि आफूहरुको कुरा नसुनिएको उनले बताए । आफूहरुको अस’न्तुष्टिलाई पनि सम्बोधन गर्दै प्याकेजमा सं’विधान संशोधन गरेको भए अझ राम्रो हुने उनले बताए । यदि त्यस्तो गरेको भए हिमाल, प’हाड, तराई मधेसका नागरिकको भावना समेटिने नेता म”हतोले बताए ।
संसदमा बोल्दै महतोले अ’नुहार हेरेर रा’ष्ट्र्रघा’ती र रा’ष्ट्रवादीको धा’रण नबनाउन आ’ग्रह गरे । प्रत्येक मधेसी जनताले सेना भएर नेपाली सी’माको र’क्षा गर्दै आएको उल्लेख गर्दै उनले आफूहरुमाथि शं’काको दृ’ष्टिले नहेर्न आ’ग्रह गरे । ‘हाम्रो बारेमा त अ’नुहार हेर्ने बि’त्तिकै यो त मधेसी, यो त विदेशी नै होला, यो त भारतीय नै होला भन्ने कुण्ठाबाट भरिएका नश्लीय चिन्तनहरु छन् ।
आ’जबाट त्यो हटा’इदिउँ । प्रत्येक मधेसी जनताले सेना भएर नेपाली सी’माको र’क्षा गरेको छ । तपाईले वि’भेद र अ’न्याय गरे पनि विभिन्न प्रकारले पीडा पु¥र्‍याए पनि आफ्नो सी’माको रक्षाका लागि लडेको छ । मरेको छ,’ महतोले भने ।रा’ष्ट्रवादको स’वालमा मधेसी जनताको पटक-पटक अ’ग्निपरीक्षा लिने गरिएको भन्दै उनले आफूहरुको रा’ष्ट्रवादप्रति औैलो उठाउने काम नगर्न पनि स’चेत गराए ।
को हो राष्ट्रवादी हो ? म’धेसीलाई रा’ष्ट्रघा’ती भन्ने ? मधेसीलाई रा’ष्ट्रवादी नभन्ने ? यो देशको मधेसी ज’नतालाई त्यसरी औला ठ’ड्याउने काम कसैले नगरोस् । रा’ष्ट्रवादको मामलामा कतिचोटी अ’ग्निपरीक्षा दिने हो ? कति चोटी प्र’माण दिने हो ? यस्तो अ’ग्निपरीक्षा नलिनुहोस् । स’म्पूर्ण नेपाली जनतालाई यो रो’ष्टमबाट भन्न चाहन्छु । यस्तो अ’ग्निपरीक्षा नलिनुहोस् ।
त्यो मधेसी जनताप्रति अन्या’य नगर्नुहोस् । यो देशको आ’दीवासी, थारु र दलितमाथि अ’न्याय नगर्नुहोस्,’ उनले भने । भारतसँग महाकाली सन्धि गर्दा ग’ल्ती भएको भन्दै उनले त्यसरी गल्ती गर्नेको पहि\_चान गरी कार’बाही गर्न पनि माग गरे । उनले भने, ‘एउटा कुरा देशवासी जान्न चा’हन्छ । अब फेरि यो देशमा रा’ष्ट्रघा’त हुने हो कि ? यो रा’ष्टघा’ती को-को हो यो देशमा पहिचान ग’र्नुप¥र्‍यो । देश बेचु’वाहरु को-को हो ? देश बे’चुवाहरुको खोजी हुनुप¥र्‍यो ।